एचआईभी एड्सबाट पहिलो पटक एक जना पूर्णरुपमा निको ! -
एचआईभी एड्सबाट पहिलो पटक एक जना पूर्णरुपमा निको !
एजेन्सी । एक अमेरिकी महिला एचआईभी एड्स रोगबाट पूर्ण रुपमा मुक्त हुने विश्वकै पहिलो महिला भएकी छन् । रक्त क्यान्सरको उपचारका क्रममा ती महिलालाई एड्स निम्त्याउने भाइरसविरुद्ध प्राकृतिक प्रतिरोधी क्षमता भएका व्यक्तिबाट स्टेम कोष प्रत्यारोपण गरिएपछि उनी निको भएको बताइएको छ ।
तर उनको नाम र वास्तविक परिचय खुलाइएको छैन । बिबिसीका अनुसार उपचारपछि ती महिला विगत १४ महिनायता भाइरसमुक्त भएकी छन् । यसरी एचआइभीबाट मुक्त हुने उनी समग्रमा विश्वकै तेस्रो व्यक्ति हुन् । तर विज्ञहरूले भने नाइटोबाट रगत प्रत्यारोपण गरिने यो विधि एचआईभी भएका अन्य मानिसहरूमा प्रयोगमा
ल्याउन धेरै जोखिमपूर्ण रहेको बताएका छन् । बिरामीको उपचार गरिएको यो विषय मङ्गलवार डेन्भरस्थित एक चिकित्सा सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिएको थियो । एचआईभीको उपचारमा यो विधि प्रयोग गरिएको पहिलो पटक सार्वजनिक भएको हो ।क्यान्सरको उपचारका लागि नाइटोबाट रगत प्रत्यारोपण गरिएको
ती महिलालाई एचआईभीको उपचारका लागि एन्टीरेट्रोभाइरल थेरापी आवश्यक परेको थिएन । अमेरिकामा एचआईभी सङ्क्रमित मानिसहरूमा क्यान्सर र अन्य गम्भीर रोगको उपचारका लागि उस्तै प्रकारको रगत प्रत्यारोपण विधि प्रयोग गरेर भएका उपचारबारे गरिएको व्यापक अध्ययनमध्ये यो उपचार पनि एक थियो ।
एचआईभीको यसअघिका दुई वटा उपचारमा बोनम्यारो प्रत्यारोपणको प्रक्रियाबाट वयस्क स्टेम कोषहरू बिरामीको शरीरमा राखिएको थियो ।
‘नेपाललाई पेट्रोल डिजेल र एलपी ग्यासमुक्त
सिसडोल पुगेर बालेनले भने- ‘केमिकल हालेर
चलचित्र ‘कबड्डी ४’लाई पहिलो साता साढे
डेढ महिनामा १३ अर्ब रुपैयाँ खर्च
‘मिरुनालाई बचाउन आफ्नो गल्ती नभए पनि
जार र बोत्तलको पिउने पानीको मूल्य
हृदयाघात हुनेको सङ्ख्यामा दोब्बर वृद्धि, ६५ प्रतिशत चुरोट सेवन गर्ने
बालबालिकाले खाने बालभिटा गुणस्तरहीन भेटियो
ओमिक्रोनको सब भेरियन्ट डेल्टा जत्तिकै खतरनाक
जोन्सन एण्ड जोन्सन खोप लगाएकाले बुस्टरको रुपमा अर्को खोप लगाउन मिल्ने
सत्यमोहनलाई भेट्न अस्पताल पुगे मन्त्री खतिवडा, उपचारमा कुनै कसर बाँकी नराख्न निर्देशन
कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट ‘नियोकोभ’ भेटियो: कति खतरनाक छ?
कुन रक्त समूह भएकालाई लामखुट्टेले धेरै टोक्छ ?
डब्लूएचओले भन्यो- ‘ओमिक्रोनले नै कोभिड महामारी अन्त्य गराउँछ’